ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအိပျ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
le Htat ကြီး Payan Beverage ထုတ်ယူခြင်း →
ရှေးခေတ်အပျက်အယွင်းများတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ idyllic အဖွဲ့ Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနောက်ကွယ်မှလမ်းဆင်းတိုက်ရိုက်အိပ်ရ. အဆိုပါအုပ်စုသည်ညာဘက်လက်ဝဲမှပါဝင်ပါသည်, အဆိုပါ Wingaba ကျောင်းတိုက်, မြင့်မိုတောင်စေတီတော်, Lawka Dawtha က Man အောင်စေတီတော်နှင့် ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအိပျ.
အကြားတည်ဆောက်ထားဒီအုပ်စုတစ်စုအကြောင်းကိုပုံမှန်မဟုတ်သောကဘာလဲ 1715 – 1730အေဒီနှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ parapet ပြားမိုးနှင့်အတူမြို့ပတ်ရထားအဆောက်အဦးနှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်. မြန်မာအများစုသည်ဘုရားကျောင်းနှင့်စေတီပုထိုးများအားလုံးထိပ်ပေါ်မှာ pointy spiers ရှိ, ပြားချပ်ချပ်မဟုတ်ခေါင်မိုး.
လက်ဝဲပေါ်တွင်စတုရန်းနှစ်ခုဇာတ်လမ်းအဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်း (Wingaba ကျောင်းတိုက်) အလယ်ဗဟိုတွင်ကြီးမားသောစတုရန်းအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးမီးရှူးတိုင်ကိုယူတစ်ခုသို့မဟုတ်အလင်းကဲ့သို့သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ. လေးတက်လှေကားများအပြင်, တစ်ခုချင်းစီကိုထောင့်ရှိတဦးတည်း, အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းပတ်ပတ်လည်ကို run ကြောင်းစင်္ကြံသည့်အထက်အထပ်မှမြေညီထပ်ကနေဦးဆောင်. ခေါင်မိုးတွင်အဆောက်အဦး၏ထိပ်ပေါ်မှာဂုဏ်ယူစွာမတ်တပ်ရပ်ကြလိမ့်မယ်လို့တော်တော်များများ spiers သို့မဟုတ်စေတီပုထိုးများ၏ remanants များမှာ.
Wingaba ကျောင်းတိုက်၏ချက်ချင်းညာဘက်သင်မြို့ပတ်ရထားများ မြင့်မိုတောင် အဆိုပါခေါင်မိုးပေါ်မှဦးဆောင်ပြင်ပအပေါ်တစ်ဦးလှေကားနှင့်အတူ. အဓိကလှေကား၏တစ်ဖက်ကိုသာပထမဦးဆုံးအထပ်အဆင့်အထိတက်သွားကြောင်းနှစ်ခုကတခြားတက်လှေကားများအပြင်များမှာ. သေးငယ်တဲ့စတုရန်းလေးထောင့နှင့်မြို့ပတ်ရထားစေတီတော်ကို sited ထားတဲ့အပေါ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေသင်သေးငယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့၏ကြီးမြတ်အမြင်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးလက်နှင့်အတူအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်.
မြင့်မိုတောင်၏ညာဘက်မှအမည်ရှိအရပ်ရှည်ရှည် whiteish spired စေတီတော်ကိုဖြစ်ပါသည် Lawka Dawtha က Man အောင်စေတီတော်. Lawka Dawtha က Man အောင်စေတီတော်အနားမှာသေးငယ်တဲ့အဆောက်အဦးထဲမှာဗုဒ္ဓ၏ရုပ်ထုနှင့်အတူငယ်တစ်ခုနတ်ကွန်းရှိပါတယ်.
အဆိုပါ ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအိပျ အဆိုပါဝေးညာဖက်မှာကို quartet ပြီးဆုံး. ဒါဟာရှေ့၏ဗဟိုအတွက်အကြီးအကျယ်ရပ်နားရှိပြီးတံခါးဝအဖြစ်ပြုမူတဲ့ကြီးမားတဲ့စေတီတော်ကိုရာပြင်ပနံရံများဖက်ကကြောင်း၌ဤအဆောက်အဦကကိုယ်ပိုင် pecularity ရှိပါတယ်. သငျသညျအဓိကအဆောက်အဦရိုက်ထည့်ဖို့စေတီတော်ကို၏အခြေစိုက်စခန်းမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်. မြန်မာနိုင်ငံတွင်တခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုဖို့တစ်ကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်း. အဆောက်အဦး၏နောက်ဘက်မှာအဆောက်အဦး၏အထက်အဆင့်အထိဦးတည်စေတဲ့လှေကားဖြစ်ပြီး. ထိပ် Access ကိုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခေါင်မိုးပြိုကျဖြစ်နိုင်မဖြစ်စေခြင်းငှါ.
သငျသညျနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအိပျ – Google Maps ကို
ကျောင်းအိပျကျောင်းတိုက်အပါအဝင်ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦး၏ဤအုပ်စုသည်, Lawka Dawtha က Man အောင်စေတီတော်, မြင့်မိုတောင်စေတီတော်နှင့် Wingaba ကျောင်းတိုက်ရုံခရီးစဉ် truely ကျိုးနပ်ပါစေသောသူတို့ကိုပယ်စည်းချက်သောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.